Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : mpanatanteraka ny minisitra | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : mpanatanteraka ny minisitra
aSamy manana ny vetsovetsony avokoa ny olom-pirenena mikasika ny karazan’olona iriny ametrahana an’izany andraikitra amin’ny maha minisitra izany. Tsy hiditra amin’ny adihevitra hoe minisitra avy ao amin’ny sehatra pôlitika sa minisitra nosafidina noho ny fahaizany manokana mikasika ny tontolon-draharaha ahankina ao amin’ny fifehezany. Ny faniriana dia mba ho olo-marina sy olon-kendry no ho tendrena hiantsoroka an’izany adidy ambony izany. Asa na inona na inona ny antony mahatonga ny tranga ankehitriny fa lasa maneno sahona avokoa avy atsy avaratra sy avy ao atsimo. Samy be famaritra ary samy tsy vitan’ny hoe fanehoana faniriana fotsiny fa toy ireny fanomezana baiko ireny mihitsy ny fanambaran’ny vondrona izay tsy mijoro akory ho mpanao pôlitika, nefa mazava mihitsy fa manao fanavakavahana noho izay pôlitika izay.
Ao anatin’ny demokrasia ny vahoaka no loharanom-pahefana. Izy no manome fahefana ny mpitondra amin’ny alalan’ny fifidianana. Mijanona eo anefa ny anjarany. Tsy manana alalana intsony ny vahoaka avy eo ahafahany mitsabaka amin’ny fomba fitantanana. Misy ny lamina mifehy izany. Raha tsy izay, lasa ady saritaka lalandava. Aiza tokoa moa no ahafantarana hoe iza marina no tena vahoaka. Aiza marina ny tena tenin’ny vahoaka raha toa tsy misy fomba famerana an’izany, toy ny fomba fanao rehefa misy fifidianana. Lasa matetika dia izay mijoro ka manambava manandratra ny tenany ho mpitondra tenin’ny vahoaka ihany no hany re eo anivon’ny fiarahamonina. Ny kely feo sy ny madinika dia tsy mahita sehatra mangirana ahafahany milaza ny ao an-tsainy.
Any amin’ny fifidianana mitovy lanja ny hevitry ny tsirairay tsy misy fijerena tavan’olona. Noho izany na amin’izao korontana izao aza, izay ahitana fa mivahavaha avokoa ny fitsipika sy lasa goragora ny fampiharana ny lalàna, dia sarotra ekena ny fitsabahan’ny tsirairay ao anatin’ny fitantanana. Aoka tsy ho adino na ao anatin’ny demôkrasia aza fa tsy ny mpiasam-panjakana ao anatin’ny minisitera no misafidy na afaka manda ny minisitra miadidy ny sampana misy azy.
Ny hery pôlitika aza araky ny fahatazanana azy amin’izao fotoana izao dia efa tsy fidiny ny fisehoany miady varotra toerana toy ny fifampisintonana tsinain-kena ifanaovan’ny mpanimbika. Toy ny mahazatra, dia fitazanana no anjaran’ny. Any no azo iandrasana amin’ny kendry tohana ireo manalikiliky ny saina, fa tsy ankehitriny no andeha hanampy korontana amin’ny raharaha efa misamboadimboadika mila tsy ahitana vahaolana.